Yenza umsebenzi wasekhaya | Thenga ngoku | Ipapernerds
Abaphumeleleyo kwisikolo samabanga aphakamileyo bazilungiselele izifundo zabo kunye nemiba yemiceli mngeni yasekhaya. Kuba, ngakumbi ngexesha lokufunda kwakho, kuya kufuneka ubhale umsebenzi wesikolo omninzi. Amaphepha ekota asisiseko somsebenzi wobunzululwazi. Amaphepha ekota kufuneka avakalise ukuba ingcinga yesayensi ayisiyonto yangaphandle yomfundi. Ukubhalwa kwengqondo okucacileyo yenye ingxaki.
Iphepha lesikolo esiphakamileyo libalulekile kwinqanaba le-Abitur yenqanaba. Iphepha lekota eliyunivesithi lenza isigqibo sokudlula okanye ukusilela kwimodyuli yokufunda. Ukuphinda imodyuli kubiza ixesha elininzi (kunye nemali eyongezelelweyo). Xa usenza iphepha lekota, uxinzelelo olongezelelekileyo lwexesha elibekiweyo yinto ekhokelela ekucingeni nakwibhloko yombhali. Ngenxa yezi ngxaki, ukulungiswa kwangexesha kunokuba kude.
Ekugqibeleni, zimbini kuphela iindlela zokujongana nale micimbi. Ithuba loku-1: Iphepha lekota libhalwa ngokwazisa ngokubhala kunye nokungenisa amalungiselelo angonelanga. Ngayiphi na imeko, oku kucinezela umndilili webakala liphela kwinqanaba le-Abitur. Ikhosi oyifunayo yokufunda iya kuhlala ingumnqweno. Kubomi beyunivesithi bemihla ngemihla, inqanaba elihlwempuzekileyo likhokelela kwelona lihle ekwenzeni umsebenzi wasekhaya kwakhona. Kwimeko embi, kukho umngcipheko wokungabandakanywa ekuqhubekeni nezifundo zakho.
Inketho 2: Ukuyalela ukhetho 1 kwasekuqaleni, iyavakala into yokuba uthenge iphepha lekota. Oku kuchaza indlela eya empumelelweni. Ungahlala ngoxolo kwaye wonwabele usuku.
Eyona nto iphambili kwinkampani yethu yimfihlo, ilandelwa kukuthembeka kunye nomgangatho ophezulu. Umsebenzi wakho usikhuthaza ukuba sihlale siqinisekisa ukuba iphepha lakho lekota liyahambelana nenqobo zenzululwazi malunga nokuphunyezwa kweelwimi kunye nobugcisa. Kokwenu, oku kuthetha ukuba unokuqiniseka ukuba ukwicala elikhuselekileyo kunye nephepha lekota elibhalwe ngababhali bethu. Ababhali abavela kuwo onke amabakala oluntu kunye nesayensi yendalo babhalela iarhente iPapernerds.de. Nokuba izihloko ezingaqhelekanga zicutshungulwa ngesazela ngababhali bethu bezemfundo. Nokuba ufuna uyilo olupheleleyo lwephepha lakho lesigama okanye u "ukuhlela nje", ukufundisisa amaphepha okanye ukongeza kwisicatshulwa sakho esele sikhona, loo nto yesibini. Ngayiphi na imeko, ayithethi ukuba inkampani yethu iya kudibana nexesha elibekiweyo.
Siyahambelana nemimiselo kunye neemfuno ezisesikweni ozinikwe sisikolo sakho segrama okanye eyunivesithi ukulungiselela iphepha lekota ngaphandle kokucela. Sikwafumaneka nanini na-nangeempelaveki. Ngokombutho, oku kunokwenzeka kuphela kuba sikunika isuphavayiza yakho ecaleni kwakho, onokuthi ngayo uxoxe ngezicelo zotshintsho kunye nombhali nangaliphi na ixesha kwinkomfa yomnxeba. Ngesiqhelo, uya kufumana kuphela umsebenzi wakho ogqityiweyo wasekhaya wakuba uvunyiwe ngumhleli kwinkampani yethu.
Unonophelo lobungcali lomsebenzi wakho wasekhaya sisiqinisekiso kuwe. Kuba awuthengi iphepha lekota, inkonzo yethu iyakuxhasa kwindlela yakho evela kwisikolo esiphakamileyo ukuya esiphelweni sezifundo zakho (nangaphaya) ngeetekisi zobungcali.
Ukuqala kokusebenzisana okunempumelelo
Ngaphambi kokuba uqhakamshelane nathi-nokuba nge-imeyile, umnxeba okanye ezinye iindlela zonxibelelwano-kuya kufuneka uyazi ukuba wena njengomthengi uhlala unelizwi lokugqibela. Wena kwaye uya kuhlala ungumphathi! Kuba umisela uhlobo lwetekisi, isihloko, ubungakanani kunye nexesha elimisiweyo. Ngaphambi kokuba uqhakamshelane nathi, unokufumanisa malunga neendleko ezinokubakho usebenzisa ikhalityhuleyitha zethu kwiwebhusayithi yethu. Apho unokwenza ungeniso olwahlukeneyo apho kuqikelelwa ukuba ziindleko eziqikelelweyo. Faka iinkcukacha ezifunekayo
Uhlobo lomsebenzi okanye inkonzo
Inqanaba (lokufunda, ukukhuphela, intetho, njl.
Ixesha elimisiweyo lokuba uza kwenziwa nini umsebenzi.
Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali lukufanele kwaye ufuna ukusebenza nathi, inyathelo elilandelayo kukunxibelelana nearhente yethu. Uxoxa ngeemfuno zakho ezithile kunye nathi. Uya kuthi emva koko ufumane isithembiso sexabiso esibophelelayo.
Yintoni eyahlula inkampani enesiporho
Njengalo lonke ishishini, ishishini lokubhala ngesiporho alisindiswanga ngeegusha ezimnyama kunye nabakhohlisi. Zininzi iinkampani eziyinkohliso ekuthiwa zibonelela ngeenkonzo zokubhala, kubandakanya iiwebhusayithi zolwimi lwaseJamani. Ngamanye amaxesha bayongena kwiiwebhusayithi zenkampani ezaziwayo kwaye batsale abathengi babo kungekuphela kumgibe weendleko, kodwa-ukuba bazisa inkonzo-kumgibe wokubambisa. Umgibe weendleko kuba abathengi kufuneka badlulisele imali kwiakhawunti engathandabuzekiyo yelinye ilizwe. Nje ukuba kwenziwe ugqithiso, akukho nkonzo iya kuthi inikezelwe. Inkampani ekucingelwa ukuba sisiporho nayo ayisekho. Ukuba inkonzo ithe yaziswa kunjalo, inokubonwa ngaphandle koviwo olukhulu ukuba umsebenzi wawudityaniswe kunye ngokungxama kwaye akukho mpumelelo yenzululwazi yawo. Ukuba umsebenzi onjalo uhanjiswa eyunivesithi okanye kwisikolo segrama, kwimeko embi, iziphumo zokukopa ngokucacileyo kunokuba kukucinywa kobhaliso.
Ungaziqonda iinkampani ezibhaliweyo zokubhala ghost ngeendlela ezahlukeneyo:
Umsebenzi ophetheyo udwelisiwe kwimibhalo yewebhusayithi yenkampani
Inkampani ibhaliswe kwirejista yezorhwebo (eJamani, eSwitzerland, e-Austria)
Iintlawulo zenziwa kuphela kwiiakhawunti zebhanki eJamani, eSwitzerland okanye e-Austria
Ubulumko kunye nokufihla phakathi kwearhente kunye nawe njengomthengi kubaluleke kakhulu
Ukungaziwa phakathi kombhali kunye nawe njengomthengi
Ukubakho kwentlawulo ngezavenge kwiiodolo ezinkulu
Ukusebenzisana phakathi kwakho njengomthengi kunye nearhente kunye nombhali. Ukungaziwa phakathi kwakho nombhali kuyagcinwa.
Ababhali bearhente yethu zizifundiswa ezinedigri yaseyunivesithi.
Ukwenza ukuhlelwa kunye nokubhalwa kwamaphepha.
Iarhente yethu yokubhala ghost iyazifezekisa zonke ezi mfuno zingasentla. Ziyimigangatho yefilosofi yethu yobumbano!